2 ပေ (Tree / မျှော်စင် / Scratch)
6 ပေ Toy
အံ့ဩခြင်း DC ဒစ္စနေးပေထုတ်ကုန်များ
ကြောင် post ကိုကုပ်ခြစ်လက်ကား elastic နာနတ်လျှော်ခြစ် post ကိုမြို့ရိုးကိုထောင့်ကြောင်သစ်ပင်
ဆိပ်ကမ်း: Ningbo or Shanghai
ကောင်းသောအရည်အသွေး, ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုကောင်းသောစျေးနှုန်းနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနိယာမဖြစ်ကြသည်။ ကြောင်းပေါ်အခြေစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မြောက်အမေရိက, ဥရောပ, ကိုရီးယားနှင့်ဂျပန် .Moreover ထံရောင်းချခဲ့ကြ, ငါတို့သည်ဤစျေးကွက်အတွက်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုခံစားကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဟောင်းနှင့်အသစ်ကဖောက်သည်များနှင့်အတူကပိုပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဘို့ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။
ကြောင်ခြစ် post ကို
အရေအတွက် (Set) 1 - 1 > 1
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (ရက်) 15 ညှိနှိုင်းရမည့်
ဒါကနောက်ဆုံးရကြောင်ခြစ်ပင်အပို comfort.The ပြွန်သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့နာနတ်လျှော်ကြိုးနှင့်ပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်ကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒါဟာအားလုံးဤနေရာတွင်အနားယူ, စူးစမ်း, လိုက်ဖမ်း, perching, တောင်တက်ကုပ်ခြစ်ခြင်းနှင့် justplain ပျော်စရာပေါင်းစပ်, အဆိုပါ plush carpeted မျက်နှာပြင်ကိုမဆိုကြောင်များအတွက်အဆုံးစွန်နေရာဖြစ်သည် အတူခြစ်ရာများနှင့်ကစားရန်။ သင်သည်သင်၏ကြောင်မှဒဏ်ရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဒါကြောင့်မည်သည့်အပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီကြံ့ခိုင်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုခုလှုပ်ရှားကာကွယ်ပေးသည်; အဆိုပါစတိုင်ကြောင်သစ်ပင်သင့်ရဲ့ပုံစံမျိုးနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းပါလိမ့်မယ်။
Size ကို & အလေးချိန် 30*30*(40-60)CM
ပို့ဆောင်ချိန် 35 ရက်အတွင်းလက်ခံရရှိသိုက်ပြီးနောက်
♦ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ 1 နေ့ရက်ကာလ၌တင်ပို့နိုင်ပါတယ်။
♦ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ FBA ဂိုဒေါင်မှတင်ပို့နိုင်ပါ။
4.We ok, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထုပ်ဒီဇိုင်းလိုသလား?
♦စင်စစ်, giftbox, အဖုအနာကဒ်, PP အိတ်သို့မဟုတ်အခြားသင်တို့ကဲ့သို့?
သင်တို့သည်ငါတို့၏လိုဂို add လုပ်ပေး 5.How?
ပိုး Print, ဒါမှမဟုတ်ချုပ်သို့မဟုတ်အခြားအားဖြင့်သင်သည်♦လိုအပ်ပါတယ်
6.Is ကလက်ဝဲလက် & လက်ျာလက်သို့မဟုတ်အများအပြားမော်ဒယ်ရောနှောဖို့ workable?
ယခင်: တရုတ်လက္ကားသစ်ကိုကြောင်အရုပ်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြောင် scratcher ကတ်ထူပြား corrugated
နောက်တစ်ခု: အိတ်ဆောင်ခေါက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဝင်းခြံစည်းရိုးစောင့်တပ်ဖွဲ့ကွက်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကို Magic ဂိတ် mesh ခွေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဂိတ်
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကစားစရာဒေါင်လိုက်ကြောင် Scratch Post ကို, M က 3-ဘက် ...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များကြောင် Scratcher Scratch Pad တက်ဘလက်များသည်နှင့်အတူ ...
အမေဇုံဟော့ရောင်းရန်ကြောင် Toy မြှောင်းပုံ Scratch ဘို ...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရုပ် 3-in-1 Lounge ကြောင် scratcher ကတ်ထူပြားကို p ...
အိပ်ရာကစားစရာပန်းကန်-shaped ca ကိုအိပ်ပျော်နေသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်ကြောင် ...
RM1003, chuangyi sheji အဆောက်အဦ, 508 TaiAn လမ်း, Shounan လမ်း, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo, တရုတ်, 315100
Interzoo - fo ထုတ်ကုန်များအတွက်ကုန်သွယ်မှုတရားမျှတ ...
© Copyright - 2010-2021 : All Rights Reserved. ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်လက်အိတ် , အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက် , အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် & စောင့်ရှောက်ကုန်ပစ္စည်းများ , Pet Grooming Comb, ခွေးစောင့်ရှောက် , Master Grooming Tools,